चिसोमा भूकम्पपीडित « News of Nepal
मंसिर नसकिँदै जाडो बढेको छ । अझै पुस–माघ महिनाको ठण्डी र तुसारो भोग्नै बाँकी छ । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका अधिकांश पीडितहरू यो वर्ष पनि जस्ताकै टहरोमा तुसारो, शीत र ठण्डीसँग मुकाबिला गर्न बाध्य भएका छन् । भूकम्पपीडितका नाममा दिने भनेको ३ लाख रकम होइन, कतिपय भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको ५० हजारसमेत अझै पाउन सकेका छैनन् ।
पटक–पटक परिवर्तन भएका सरकारका आश्वासन, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ढिलासुस्ती, पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरूका कारण पीडितहरू झनै पीडित बन्न थालेका छन् । केही भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताबापतको रकम नै प्राप्त गरेका छैनन् भने केहीले पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरे पनि कसरी बाँकी किस्ता लिने भन्ने अन्योलमा छन् । सम्झौता भएकाहरूले पनि रकम लिन पाएका छैनन् । बिहान ओछ्यान छाडन नपाउँदै शीतको वर्षा शुरु हुन्छ । केही दिनदेखि बढेको चिसोले गर्भवती, बालबालिका र वृद्धहरूलाई मात्रै होइन, टहराभित्र बस्ने अधिकांश व्यक्तिलाई सताउन थालेको छ । उसै त बिरामी भइरहने, झनै गर्भवती भएको समयमा गर्भको बच्चालाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने चिन्ताले गर्भवतीहरूलाई सताउन थालेको छ ।
चिसोका कारण सबैभन्दा धेरै पीडित वृद्ध, बालबालिका, गर्भवती, अशक्त, अपांग पीडित बन्न पुगेका छन् । राजधानीभित्रै पनि भूकम्पपीडितको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कतिपय गाविसका कुनै पनि भूकम्पपीडितहरूसँग सम्झौता हुन सकेको छैन । लालपुर्जा नभएका कारण मालपोत तिरेको रसिदका आधारमा सम्झौता गर्न मागिएको सुझावका बारेमा पनि प्राधिकरणले कुनै राय र निर्णय दिन सकेको देखिँदैन । भूकम्पपीडितका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूले येथेष्ट चासो नदिँदा समस्या चर्किरहेको छ ।
पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरेका लाभग्राहीहरूको सहजीकरणका लागि खटिएका २७ सयभन्दा धेरै इन्जिनियर, सब इन्जिनियरहरूको टोली पनि अलपत्र परेको छ । रकम लिएर घर बनाउने सुरसार नहुँदा, घर बनाउनेहरूले पनि इन्जिनियरहरूलाई मतलब नगरेका कारण इन्जिनियरहरू अलपत्र परेका हुन् । तर तिनै इन्जिनियरहरूले दिएको प्राविधिक सल्लाहका कारण भूकम्पपीडितले दुःख पाएको गुनासो गरेका छन् । पीडितहरूले ९⁄१२ को पिल्लरमा घर निर्माण शुरु गरेका छन् । सम्झौतामा १२⁄१२ पिल्लर समावेश गरिएको छ । आधा निर्माण भएका घर भत्काउने कि त्यसमै सम्झौता गर्ने ? यस्ता समस्याको समाधान समयमै हुन नसक्दा टहराको बसाइ लम्बिदो छ । जाडोको समयमा टहराको बसाइले स्वास्थ्य समस्या निम्तिनेछ । यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
आलोचित सरकार र प्रधानमन्त्रीको रोइलो
उपराष्ट्रपतिको व्यवस्थापनमा ध्यान देऊ
सरकारको लोकतान्त्रिक निष्ठामाथि प्रश्न
त्रिविको सम्पत्ति खोज्ने, सकारात्मक अभियान
संसद भवन बनाउन चासो देऊ
माइतीघर मण्डला र जुम्ला घटनामा सरकारबाट ज्यादती भयो – सभापति देउवा
डा.केसीको समर्थनमा काठमाडौंमा प्रदर्शन (फोटोफिचर)
जुम्लाबाट डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याइयो
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सांसदहरुको अवरोध कायमै
पुरानै संरचनामा लोक सेवाको विज्ञापन
ओली सरकारको चौतर्फी विरोध, सरकारविरुद्ध कांग्रेस आक्रामक
डा. केसीलाई बल प्रयोग गरेर काठमाडौ ल्याउन अस्पतालमा प्रहरी र सेना परिचालन
डा केसीलाई लिन जुम्ला पुगेको सरकारी टोली स्थानीयबीच झडप
दिनभर विद्युत कार्यालय बन्द, कर्मचारी भोजमा रमाउँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती
सरकारको ज्यादतीः काठमाडौंका लागि उडेको हेलिकोप्टर सुर्खेत पुग्यो
शुल्क वृद्धिको विरोधमा विद्यार्थीले ताला लगाए
रुकुम पश्चिममा करिब ७५ करोड रकम फ्रिज